Ny Vavaka | dailynews.blaogy
Lazao an Atra fa be voninahitra Izy, lazao ihany koa fa tianao Izy.
Ny vavaka nampianarin ny Tompo dia nanomboka t@ hoe Rainay izay any andanitra, hohamasinina anie ny anaranao… Mino aho fa faly Atra rehefa manome voninahitra azy ny olona iray rehefa mivavaka fa tsy tonga dia mangataka. Na I Jesoa aza rehefa nampianatra ny mpianany nivavaka dia nanandratra an Atra sy nanome voninahitra Azy ihany koa aloha. Afaka milaza amin Atra fa Atra masina Izy, Atra mahery Izy, Atra fitiavana Izy, Atra ny Atra rehetra Izy, Atra tokana Izy, Atra marina Izy, Atra nahary izao rehetra izao Izy, Jehovah rafa na Atra mpanasitrana Izy, Jehovah Jireh na Atra mpiahy Izy, Jehovah tsidkenu na Atry ny fahamarinako Izy, Jehovah shalom na Atra ny filaminana Izy (peace)…(eny anarany daholo izany)…eny betsaka ny zavatra azo lazaina momba an Atra izay manome voninahitra Azy… Aza adino ihany koa ny milaza fa tianao Atra ary tsy manana Atra hafa hafa tsy Izy ianao. Lazao fa tianao Izy ary te hanao ny sitrapony ianao sns…..
Ny fisaorana dia zava dehibe ihany koa.
Isaory an Atra @ zavatra rehetra eo amin ny fiainanao. I Tes 5:18=> misaora @ zavatra rehetra fa izany no sitrapon Atra ao amin I Kristy Jesoa ho anareo.
Fanontaniana fotsiny ihany no apetrako aminao eto: nilaza ve Atra hoe misaora amin ny zavatra tsara ihany? Efa nisaotra t@ zavatra zavatra izay hitanao fa tsy tsara ihany koa va ianao teo amin ny fiananao? Mety tsy mifanaraka amin ny saina maha olombelona tokoa saingy izany no sitrapon Atra. Tadidio ny tantaran I Jesoa t@ ilay mofo roa sy hazandrano dimy. Tsy nimenomenona mihitsy izy hoe: aiza ve dia olona dimy arivo dia hazandrano dimy sy mofo roa fotsiny no eo ampelatanana. Tena tsy rariny izany sns…izany ve isaorana an Atra? ..tsia, inona no nataony? Na inona na inona teo ampelatanany sy fitrangan-javatra dia nahalala nisaotra Izy. Ary nony nisaotra t@ zavatra tsy nahafinaritra Izy (mofo dimy zaraina ho an ny olona dimy arivo ve hahafinaritra? Sa hoe samy mahazo potipotiny? Lol..), Fa ny nataony dia nisaotra tao anatin ny olana Izy, dia niseho ny voninahitr Atra.
Sao dia io olana mitranga eo aminao io, fisaorana no andrasan Atra aloha fa tsy fangatahana hoe vahao ity Tompo o, vahao'ty oa..fa sao kosa hoy ny Tompo hoe: miandry anao aho aloha hisaotra ny @ zavatra rehetra vao hampiseho ny voninahitro fa fankatoavana Ahy izany!
Manaraka izany. Isaory an Atra ihany koa ny zavatra rehetra eo ampelatananao. Eny fa na dia ny ainao sy ny rivotra izay fohinao androany aza dia hisaory Azy fa hahafaly ny fony izany. Hisaory Azy h@ kely indrindra izay ananao. Eny fa na dia io vola ariary ananano io aza, io ankihy kely ananano io aza, afaka alany aminao androany dia androany raha tiany alana izany. Tsy misy afaka mitompo teny fantatra fa hananay mandrakizay izay zavatra eo ampelatanany androany. Raha alany amiko ny aiko androany dia lasa izany, tsy misy azoko tazomina na ny kely aza. Izany no tsy hideraderana mihitsy izay hanana. Raha tian Atra alana amiko izay rehetra ananako @ indray mipimaso monja dia afaka alany amiko izany. Raha ny fahaizana no hireharehana…mino ve ny olona iray fa ho vory saina mandrakizay ka hirehareha amin izany? Tsy aleo hisaorana an Atra raha mahatsapa tena fa manampahaizana? Raha ny vola no hireharehana, mino ve ny olona iray fa hiditra tsy ho tapaka mihitsy ny vola? Tsy aleo hisaorana an Atra izay ananana eo ampelatanana? Raha ny hatsarantarehy no ananana.sy hireharehana…h@ rahoviana anefa ilay hatsarantarehy? Rehefa mbola tsy nisy ny accident sy ny aretina izay naka io hatsarantarehy io dia hisaory an Atra hatrany sy tolory Azy hanomezana voninahitra Azy. Hisaory izy fa mbola manana ianao na izaho h@ izay kely indrindra eo ampelanatana.
Hisaory ihany koa Atra ny @ izay valimbavaka ho avy sahady fa manamporofo ny finoana izany. Kolos 4:2=> Mahareta @ fivavahana ary miambena izany @ fisaorana
Raha mangataka famahana ny olana izay mifanaraka amin ny vahaolana araka ny baiboly. Ohatra: filaminan ny tokantrano, fahendren ny zanaka, famahana amin ny famatoran ny toaka, famatoran ny sigara.sns…dia tokony hisaotra sahady fa ho avy ny valimbavaka satria sitrapon Atra ny hivavahana ny hialan izany famatorana izany.
Aza mitondra fahotana eny ampandriana (hoy ny pasiteranay izay) Midika tsotra fotsiny izao izany fa ny olona iray dia tokony miresaka indray mandeha isanandro amin ilay Ray farafahakeliny. Davida mpanjaka dia niresaka intelo isanandro t@ Atra. Ary eny fa raha milaza ny olona iray fa tia an Atra, dia tokony izy izany hanana fifaneraserana isanandro amin ilay olona tiany. Ny tsy firesahana aminy mihitsy dia fandaingana amin ny tena sy @ Atra fa tia azy ny olona iray. Olontiana ve tsy ho satry hiresahana ary hifonana sy hanaovana azafady raha nisy ny tsy nety natao? Mila mifona ho an ny fahotana izay vita sy ny fahotana izay ankasitrahana rehetra.
Ny fifonana dia tsy hoe mifona fe mifona fotsiny: hoe alefa ny fifonana dia izay. Fa ny mifona dia mila fanenenana sy fialana tanteraka t@ izay ratsy natao. Raha nankany atsimo ny fomba fihevitra taloha dia mila mankany avaratra izy izao. Fa tsy hoe mifona anefa ny lalana teo ihany no hizorako. Raha manenina marina aho, midika izany fa tsy te hamerina izay fahotana vita iny intsony.
Ahoana anefa ny fomba fanenenana fa zavatra hafa ihany koa izany?
Misy fotoana tokoa dia fantatra tsotra izao fa te hifona ary te hanenina anefa ny nofo te hanota ihany, inona ny hevitra? Nisy fotoana aho nankahala olona iray mpiara miasa tamiko, satria dia nasiaka tokoa izy io ary sarotra tamiko ny namela azy. Fantatro fa tsy sitrapon Atra ny tsy mamela satria raha ny namako aza tsy avelako ahoana no hamelan Atra ahy? Marihina fa tena nanembatsembana ny vavako mihitsy ilay izy. Ny zavatra fantatro anefa dia Jesoa milaza hoe: afaka manafaka amin ny zavatra mamatotra Izy. Raha ny zanaka no hanafaka anareo hoy Izy dia ho afaka tokoa ianareo. Koa amiko famatorana ny fankahalana. Ny vavaka fohy nataoko talohan ny tena nivavahako dia izao: Jesoa o, te hiresaka aminao aho anefa fantatro fa maloto ny foko fa mankahala andranona aho. Ampio aho hitia azy fa tsy vitako izany. Isanandro aho nangataka io mandra pahatsapako hoe tsy nankahala azy intsony ny foko. Ny marina dia tsy tafivavaka mihitsy aho fa niady t@ io toetra io aloha, satria raha hifona aho fa mankahala io olona io dia tiako hoe amin ny fo marina no entiko hifoanana fa tsy hoe fifonana avy @ vava fotsiny ihany. Ary Atra dia mahafantatra tsara izay any amponao mangina any. Tadidio fa Jesoa dia azo resahina ny rehetra noho ny namana aza. Koa afaka ianao milaza aminy izay manjo anao sy izay mamatotra anao ary mangataka aminy ny hanala ny famatorana. Rehefa vitanao izany vavaka fohy izany dia minoa fa hamaha ny fatoranao Izy raha tena t@ fo sy finoana ny fangatahana azy.
Mangataha ny Fanahy Masina hanampy anao hanenina noho ny ota natao, fa ny Fanahy Masina ihany no afaka hanampy @ izany fa raha tsy izany dia tsy hahatsiaro manenina akory ianao hoe nanao izany. Koa na hivavaka sy hangataka famelana ny fahotana aza anefa tsy manenina noho ilay fahotana vita akory dia ho tsinotsinona ihany ny vavaka. Ary tadidio fa raha misy fahotana manelanelana anao sy Atra dia tsy mihaino izy. (Jao 9:31) Izany no anisan ny tsy hahitan olona mangirana mihitsy amin ny vavaka izay atao. Mivavaka sy mifona ihany fa ny tena marina ilay fifonana atao toa fifonana routine fotsiny fa tsy avy @ fo, dia ny dikan izany mbola misy ny fahotana manelanelana anao sy Atra. Atra mahafantatra ny zavatra rehetra izy koa fantany izay any anaty fontsika rehetra any fa tsy azo ambakaina izy hoe izaho anie nifona. Mety ny vava no nifona fa ny fo tsy nifona. Dia mitovy amin ny tsy nifona ihany izany. Koa rehefa mifona dia ataovy mazava tsara hoe nifona t@ fo fa tsy nifona t@ vava fotsiny.
a) Mangataka zavatra ilaina ara panahy
Ny fangatahana anefa dia tsy mijanona amin ny fanirian ny fo amin ny resaka zavatra izay ilaiko ihany fa izay ilaina ara panahy ihany koa. Katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia homeny anao izany rehetra izany (Lio 12:31)
Mangataha ny fiitomboan ny fanjakan Atra ao anaty fonao, fiainanao sy ny sainao. Mangataha ny fanahy masina hameno anao. Mangataha ny fanahy masina hanokatra ny masonao, hanokatra ny fonao mba tsy ho fo vato eo anatrehan ny tenin Atra. Mangataha ny fanahy fitivana hitiavanao an Atra , hitiavanao ny namanao sy ny manodidina anao. Managataha an Atra hanova ny fonao sy ny fomba fisainanao Mangataha ny fanahy masina, hanova ny fomba fijerinao ny fiainana mba hifanaraka @ tenin Atra, fa tsy ny filozofian izao tontolo izao. Mangataha ny fanahy fahendrena (fanahy masina daholo izany, fanahy masina mitondra fahendrena) hanome fahendrena anao eo @ fanapahankevitra isankarazany amin ny fiaiananao. Mangataha ny fanahy masina hahatonga anao ho tia mamaky baiboly, hahatonga anao ho tia vavaka fa tsy vita ny tena irery izany ary tys tongatonga ho azy. Fa tsy natioran ny nofontsika ny mivavaka sy ny mamaky baiboly, eny ny manao ny zavatra ara panahy rehetra.Mangataha ny fanahy masina hanampy antsika ho tia vavaka. Mba tsy ho resitory foana isaky izay hivavaka na isaky ny vao hanomboka ny toriteny any ampiangonana sns…. Mangataha ny fanahy masina hiaro antsika amin ny fampianarandiso sy hanome antsika fahendrena hahafahana mamantara fanahy izay tsy avy amin Atra sns……. Mangataha ny fanahy masina hanova ny fomba fisainantsika, ny fomba firesatsika sy ny zavatra tiantsika resahina sns…… Raha tia mijery film maloto ianao dia mangataha ny fanahy masina handoro ny fisaiana maloto ao anatinao ary hangataho foana izany isaky ny mivavaka ianao mandra pahazonao ny valiny. Fa raha milaza Atra fa hanafaka dia hanafaka izy izany.
Be dia be, mbola lava be ny lisitra eto…… aza adino ny mivavaka ho an ny fiainampanahy fa tsy izay ilaina amin ny fianana andavanandro fotsiny ihany. Mangataha ny Fanahy Masina hitarika antsika amin izay ataonao rehetra. Fa isika olombelona dia tsy nofo ihany fa fanahy ihany koa. Ary samy mila sakafo izany.
b)Mangataka izay zavatra ilaina ara nofo:
Marina tokoa fa efa fantatr Atra izay zavatra rehetra ilaintsika, Izy ihany koa anefa dia nandrisika antsika hangataka. ( Jao 14:14) Mila mangataka tokoa isika satria nasain Atra mangataka. Eto izany no famborahana ny fo manontolo hangatahina izay mba iriantsika eo anatrehan Atra rehetra eny fa na hitaraina ihany koa aza izay manery ny fontsika sy mampalahelo antsika. Vavaka ho an ny tena: vola, asa, fahasalamana, fahendren ny ankizy, fanambadiana, …….. Rehefa avy mangataka ny fanjakan Atra ao anatintsika isika vao mangataha izay ilaintsika ao amin ny fiainana andavanandro sy izay mba irin ny fontsika, aoka ho marihina ihany fa vavaka mifanaraka amin ny sitrapon Atra. Fa tsy hoe maniry vadin olona dia entina ambavaka izany. Mangataha amin Atra mba hifankatia h@ fahafatesana ianareo mivady ary mangataha aminy mba arovany amin ny rany ny fanambadianareo mba tsy ho kasihin ny devoly izany(minoa ahy fa ny tanjon ny devoly dia ny hamotika ny fifankatoiavanareo mivady sy ny tokantranonao..) Eny fa na dia voninkazo be aza ny fifandraisanareo mivady androany, tsy misy afaka ny mitompo teny fantatra fa afaka ny hiaro izany fanambadiany izany @ alalan ny tenany manokana. Jesoa irery ihany no afaka miaro azy fa tsy ny fahaizan ny olona iray mitia akory. Rehefa kasihin ny devoly fotsiny ny fony hitia olonkafa na mahay mahandro sakafo tahaka ny inona sy tsara tarehy tahaka ny inona aza ny olona iray ary be vola tahaka ny inona, tsy afaka ny hiaro ny tokantranony izy hafa tsy Jesoa irery ihany. Ny vaovao tsara dia rehefa apetrany amin I Jesoa izany fanambadiana izany kosa isanandro dia mahazo matoky izy fa Jesoa no hiaro azy fa tsy ny tenany sy ny fahaizany mikarakara ilay vadiny. Ento ambavaka ny zanakao, ny fianarany, ny asan ny vadinao, ny asanao………..
Izaho manokana t@ pasiteranay nilaza hoe, ataovy précis hoy izy ny vavaka araka izay azonao atao dia ataoko précis foana ny vavako. Tsy adinoko mihitsy ilay nolazainy hoe: raha mangataka bisikileta hoy izy dia lazao hoe; miloko inona ary marika inona no tianao….. Jesoa raha nanasitrana ilay jamba, eny fa na dia fantany izao aza fa jamba ilay olona ary izany no fanasitranana tadiaviny dia mbola nanontany ihany izy hoe: inona hoy Izy no tianao ataoko aminao.(Aoka hazava eto fa tsy ho voatery hoe tsy maintsy précis ny vavaka vao mivaly an, tiako ihany kosa anefa ny manao vavaka précis raha fanatro mazava ny zavatra tiako) Nampihariko t@ fiainako manokana izany ary hitako tokoa fa nihatra. Efa nambarako imbetsaka ihany t@ namako sasany fa izaho rehefa naheno ny pasiteranay niresaka momba io vavaka précis io dia mba nampihariko ihany koa t@ fiainako izany. Nanomboka nivavaka aho nangataka t@ Atra ny olona izay ho vadiko. Nangataka aho taloha fa dia nolazaiko fotsiny hoe, omeo vady sahaza ho ahy aho dia izay. Fa nony nandre ilay hoe ataovy précis aho dia nataoko tokoa izany. Zavatra dimy no nagatahiko t@ Atra fa tiako hananan ilay vadiko , dimy taona no nagatahiko izany tsy nitsahatra. Atra dia nahatoky tokoa, fa dia nony tonga ilay vadiko dia tafiditra tao daholo ireo nangatahiko. Tsorina anefa fa zavatra tsy hoe mora angatahina ilay fangatahina nataoko fa nisy mihitsy ny hafa kely. Dia tohizo ny fangatahana sns…. Marihina fa Jesoa dia nilaza hoe afaka mangataka na inona na inona ianareo ho Izy. (Jao 15:7) Raha zavatra mbola tsy mifanohitra @ sitrapon Atra izany dia azo angatahina.
Nisy olona tao amin ny fiangonanko nagataka t@ Atra izy ny hiterahany tsy ampaharariana mihitsy. Nony niteraka tokoa izy dia tsy narary mihitsy izany fa dia vita mora tokoa. Ny tiana marihina amin io dia azo angatahina ny zavatra rehetra Atra, marihina hatrany rehefa tsy mifanohitra amin ny teniny. Na hoe zavatra hafahafa be tahaka ny hoe: Jesoa a, izaho te hanidina….koa na hitomany mandritra ny alina sy volana maro eo aza aho tsy hanidina mihitsy. Mila managataka zavatra ampahendrena. Tsy azontsika lalaovina Atra ka entina fotsiny ihany ampiasaina hisehosehoana hoe izaho mahavita ity sy itsy. Ny vavaka dia mila tarihin ny fanahy masina.
d)mangataha ny fiarovan Atra Mangataha ny fiarovan Atra eo amin ny fiananao rehetra.
Na voninkazo aza ny rehetra dia mangataha hatrany fiarovana avy aminy. Apetraho eo ampelatanan Atra ny rehetra. Manambady ianao? Na dia milamina tahaka ny inona aza ny fanambadiana dia ento ambavaka hatrany sy arovy amin ny ran I Jesoa tsy ho kasihin ny devoly. Manana asa ianao? Ento ambavaka ny asanao ary mangataha fiarovan Atra amin ny asanao. Manana zanaka ianao? Ento ambavaka sy mangataha ny fiarovan Atra azy ireo amin ny zavatra rehetra izay takatry ny saiano fa tokony hitondrana ambavaka azy. Na ny hira henoiny izany, na ny namany izany, na ny fahasalamany izany……… Manana tomobilina ianao? Mangataha ny fiarovan Atra ny tomobilinao tsy ho voan ny accident na hangalarin olona, na simban ny tondradrano sns… Betsaka dia betsaka ny zavatra azo entina ambavaka. Aza miandry ny olana mitranga vao mitondra ambavaka, fa na dia mbola tsy tonga aza ny attaque-n ny devoly dia efa arovy sahady @ ran I Jesoa ny momba anao rehetra tsy ho kasihiny. Ny ran I Jesoa dia tsy tian ny devoly.
d)Mila mangataka sy mivavaka ary mifona ho an ny hafa fa tsy ho ahy irery ihany
Vavaka ho any fianakaviana:
Mila mivavaka ho an ny famonjena ny fanahin ny olona manodidina, ny fianakaviana dia anisan izany indrindra. Nantsoin Atra hijoro isika hijoro eo alohan ny banga hivavaka ho an ny fianakaviana, manodidinana antsika sns…. : Ary nitady olona teo aminy Aho hanao manda sy hijanona eo amin ny banga eo anatrehako hifona ho an ny tany mba tsy handravako azy kanjo tsy nahita. (Ezek 22:30) resaka intercession io na hoe fivavahana ho an ny hafa.
Ny fo kristiana dia fo tia ny olona rehetra. Koa raha ho any andanitra ianao, dia ho faly handeha irery any ve fa tsy hitondra namana ary tsy halahelo raha lasa any @ helo ireo namanao na ny fianakavianao? Ento ambavaka izy ireo mba hisokatra ho an ny filazantsaran ny fanahiny. Ento ambavaka ny mpitondra ny firenena sy izay rehetra manodidina azy, mangataha fahendrena ho azy ireo, fahasalamana… Ento ambavaka ny mpitondra ny fiangoanano, mangataha fiarovana ho azy na ara batana na ara panahy, mangataha mba ho taritin Atra ara panahy izy ireo rehefa mitory. I Paoly dia nilaza mazava fa tokony hivavaka isika ho an ny fitoriana ny teny.
Ento ambavaka ny firenena Israely. Ny kristiana tia an Atra dia natsoin Atra hivavaka manokana ho an io firenena io. Fa ny fivavahana ho an io firenena io dia hanaraka ny fitahiana. Mazava ho azy, mila mivavaka ihany koa isika ho an ny firenena sy ny firenena rehetra izay apetrak’Atra ao ampontsika ho entina ambavaka, saingy ny fivavahana kosa ho an ny firenena Israely dia nolazain Atra mazava fa hitondra fitahiana ho antsika ary ihany koa fampisehoana azy fa mankatoa ny teniny isika (Salamo 122:6; Gen 12:2-3)
Ilaina ihany koa ny mivavaka amin ny alalan ny teny tsy fantatra. Mangataha!!!!!!maniria ny zava panahy!!!
Tsy haiko hoe maninona izy io no tsy tian ny olona resahina, ary raha misy ny fiangonana izay misy olona miteny @ fiteny tsy fantatra ao anatiny dia lazaina fa hoe secte izany na hafahafa ny olona ao. Ny zavatra mila fantatra dia biblika be ary sitrapon Atra ny hivavahan ny mpino @ teny tsy fantatra. Raha tsy manao izany ny fiangonanao. Iza no hinoana? Ny fombafomban ny fiangonana sa Atra??? Atra tsy nilaza mihitsy fa tsy hisy intsony izany aty aoriana fa efa miova ny olona. Tadidio foana, fa ny olombelona no miova fa Atra tsy miova. Ny zavatra hainy natao h@ izay mbola hainy atao androany fa tsy hoe rehefa mandroso ny siansa sy ny fisainan ny olombelona dia miova ny TA. Ny zavatra ara panahy voalazan ny tenin Atra tsy miova, fa izaho sy ianao no mila miova hanaiky fa mbola manandanja ny tenin Atra h@ izao isika miteny izao. Ilaina izany satria fampandrosoana ny tena ara-panahy ihany koa @ alalan ny fivavahana amin ny teny tsy fantatra.( Kor 14:4-5) Mbola betsaka ny zavatra azo lazaina momba an io saingy tsy hijanona ela eo angamba aho.
Fametrahana ny fiainana rehetra eo ampelatanan Atra:
Efa noresahiko kely tetsy ambony ity. Fa hamafisiko ihany.
Ny fametrahan ny fiainana rehetra amin ny antsipirihany eo ampelatanan Atra dia fanomezana voninahitra aminy. Filazana izany fa mahatoky azy sy miankina Aminy tanteraka ny olona iray. Ary ihany koa ny fametrahana ny fiainana amin Atra dia fiarovana ho an ilay olona izay mivavaka. Mety iny andro iray iny no andro efa nokinendrinendrin ny devoly hahavoazan ny accident anao, fa nony napetrakao sy nangatahanao fiarovana t@ Atra anefa izany andro izany dia voasakana ny planin ‘ny devoly asa…ohatra fotsiny ihany io.
Ary rehefa napetrakao teo ampelatanan Atra ny fiainanao nefa mbola misy ny zavatra mitranga izay tsy takatry ny sainao, dia aza manhy fa navelan Atra hitranga mihitsy izany iny hisehoan ny voninahiny. Tadidio ny tantaran I Lazarosy, t@ narary izy dia efa nampilaza t@ Jesoa marta sy maria hoe marary izy fa jereo. Navelan I Jesoa hitranga anefa ny fahafatesana, inona no antony nony avy eo araka ny nolazain I Jesoa. Tsy fahafatesana hoy izy no anton izao fa kosa ho fanehoana ny voninahitr Atra. Izany no antony foana hisaoran an Atra amin ny zavatra rehetra, eny fa na dia ny mafy indrindra aza rehefa avy nanao ny sitrapon Atra.
Fa hiverenako ilay etsy ambony:
Apetraho eo ampelatanan Atra ny fiainanao rehetra androany:
teneno hoe: apetrako eo ampelatananao ny fandroako, ny sakafo marainako, ny lalako mankany ampiasana, ny asa androany, ny fifaneraserana amin ny mpiasa any, ny ….h@ rehefa mody. ..izany no mahatonga ny Tompo hilaza hoe: mivavaha ka aza mitsahatra. Tsy hoe akory, mandrakizay dia handohalika hivavaka, fa kosa ny zavatra rehetra izay ataonao dia apetraho eo ampelatanany. Afaka mivavaka fohy dia fohy isaky ny hanao zavatra, tsy ho voatery hitan ny olona. Fa afaka miteny moramora ianao hoe: haka bus indray aho Jesoa a, apetrako eo ampelatanaano izany, arovy amin ny ranao aho mba tsy hisy hangaro paosy, mba tsy hitrangan ny loza ny bus sns….
Apetraho eo ampelatanan Atra ny planina nao mandritra ny taona na ny ho avinao rehetra.
Mitady vady ianao? Apetraho eo ampelatanan Atra fa planina anao izany. Mitady asa? Mihevitra ny hividy trano? Apetraho aminy koa…….
Farano amin ny hoe: amin ny anaran I Jesoa fa Jesoa no lalana hifaneraserantsika amin ny Ray sy Amena (na hoe ho tanteraka tokoa anie izany) ny vavaka. Mazava ho azy fa tsy izay ihany ny vavaka fa resaka fototra fotsiny ihany io, ary marihina hatrany fa tsy formule akory fa mba fizarana fotsiny ihany izay mba fantatro kely. Mbola betsaka no azo ampiana mazava ho azy, fa aoka aloha hijanona eo ny androany.
Ny vavaka manokana ho an ny famonjena ny fanahy ny fianakaviana na namana hafa ihany koa. Ny vavaka ho an ny olona voafatotry ny fanahy samihafa hafa ihany koa. Hezahiko resahina manaraka izay kely fantatro. Marihina fa fizarana no ataoko fa tsy hoe fampianarana. Ny fampianarana mantsy dia zavatra feno no atolotra raha ny fahazoako azy; ny fizarana kosa indray dia izay mba kely hananana no atolotra ary mety tsy ho ampy anefa mety hanampy ny hafa.
Ny fiainana kristiana | Manaraka | Mialoha | Verindrohy (trackback) (0)